China F4 Gate Valve Kugadzira uye Fekitori | Hongbang
1 MUVIRI GGG50 1
6 KUSVIRA NDEU 3
8 NUT NDEU
Kuongorora & TEST EN 12266
KUCHENGA KUTarisana EN 558
Yakazara uye yakazara kubereka
Stainless simbi isiri kusimuka hunde
Ductile simbi achikanda EPDM zvemapuranga
Hapana nzvimbo yekuchengetedza
EPDM bhoneti gasket
Screws bhoneti yakachengetedzwa
3 EPDM O mhete padanda
Mikana yekuchinja gasket pasi pekumanikidzwa
Epoxy kupenda RAL 5015 ruvara 250 μm ukobvu
Saizi H C D L . C
Dzidziso yedu ndeye "kuvimbika kutanga, mhando yepamusoro". Tine chivimbo mukukupa iwe nerakanakisa sevhisi uye yakanaka zvigadzirwa. Isu tinotarisira nemoyo wese kuti tinogona kumisikidza kuhwina-kuhwina bhizinesi kubatana newe munguva inotevera
Hwedu hwehunyanzvi hunyanzvi, sevhisi-inoshamwaridza sevhisi, uye zvakasarudzika zvigadzirwa zvinotiita isu / zita rekambani sarudzo yekutanga yevatengi nevatengesi. Tiri kutsvaga kubvunza kwako. Ngatisimudzei kubatana iko izvozvi!
Kugutsikana uye yakanaka kiredhiti kune wese mutengi ndiyo yedu yekutanga. Isu tinotarisa pane zvese zvese zvekurongedzwa kwevatengi kudzamara vagamuchira zvakachengeteka uye zvine mutsindo zvigadzirwa neakanaka logistics sevhisi uye mari mutengo.
Tichiomerera kunheyo ye "Enterprising uye Chokwadi-Kutsvaga, Preciseness uye Kubatana", netekinoroji senge musimboti, kambani yedu inoramba ichivandudza, yakazvipira kukupa iwe ine yakachipa-inodhura zvigadzirwa uye zvine hungwaru mushure-yekutengesa sevhisi. Isu tinotenda zvakasimba kuti: isu takakosha sezvo isu tiri nyanzvi.
Pashure: Knife Gate Valve
Zvadaro: F5 Gate Valve
Kanda Iron Knife Gate Valve
Cf8 Isiri-Kukwira Stem Knife Gate Valve
Kukwira Stem Knife Gate Valve Wafer
Stainless Simbi Knife Gate Valve
Chitete Knife Gate Valve